Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal Sababay Dhimashada Dad Badan oo Kasocda G/Galguduud.. | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal Sababay Dhimashada Dad Badan oo Kasocda G/Galguduud..
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal Sababay Dhimashada Dad Badan oo Kasocda G/Galguduud..
Wararka naga soo gaaraya deegaan lagu magacaabo Labadulle oo qiyaastii 25-KM koonfur bari kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay labo maleeshiyo beeleed.
Inta la xaqiijiyay lix ruux ayaa ku geeriyootay dagaalkaas, waxaana ka dhashay dhaawacyo intaas ka badan oo aan ilaa hadda la ogaan tiradooda rasmiga ah inta ay dhanyihiin.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isugu jira dhinacyadii dagaalamay, waxaana xalay ilaa saakay deegaankii lagu dagaalamay ka jirta xiisad colaadeed.
Xiriir aan la sameynay dad ku nool deegaanka uu dagaalku ka dhacay iyo deegaano hoos taga ayaa Badweyntimes u sheegay inay ka cabsi qabaan dagaal kale oo halkaasi ka qarxa, maadaama ay wali is hor fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay.
Dadkii uu khasaaruhu kasoo gaaray dagaalkaas u dhaxeeyay labada maleeshiyo beeleed, ayaa sida aan xogta ku heleyno waxaa la kala gaarsiiyay si gargaar caafimaad loogu raadiyo, magaalooyinka Ceel-Garas iyo Dhuusamareeb oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud.
Previous articleDowlada Somaliya oo Ciidamadii Ugu Badnaa Kadajisay Dhuusamareeb Iyo Xiisad Kadhalatay…
Next articleQoyska GABAR loo dilay sawirka Axmed Madoobe dartiis oo war soo saaray
XOG;Waa kuma musharaxa uu Farmaajo ka keenay Mareykanka ee loo rabo Galmudug?
Shabaabka oo la kulmaya fashilo is-biirsaday (Maxaadan Ogeyn oo soo kordhay)
DEG DEG:Qarax goor dhow kadhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan…
Xiisad dagaal oo saake ka taagan degmada Walanweyn iyo hub aruursi oo kasocda
Xildhibaan Fiqi:Yariisow hala gaarsiiyo Shacabka Muqdisho uma baahna Guulwade..& [Jawaab Culus]
Xildhibaan laga saaray aqalka baarlamaanka Kenya ka dib markii ay la timid canugeeda
MD Farmaajo Oo La Kulmay Kaaliyaha Xoghayaha Guud Ee QM U Qaabilsan Arrimaha Siyaasadda